Pụrụ Ime Obere | ThatsLuck.com
Dekọọ nọmba roulette n'ịntanetị
Pụrụ Ime bbylọ bụ sọftụwia ọhụrụ roulette na-enye gị ohere ịdekọ ọnụọgụ ntanetị n'ịntanetị na-akpaghị aka maka ụbọchị.
Inwe ngwá ọrụ dị otú ahụ n'aka gị bụ n'ezie dị ezigbo mkpa, n’ihi na ọ na-eme ka onye ọkpụkpọ ahụ nyochaa ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ setịpụ usoro egwuregwu ruo ugbu a agaghị ekwe omume ịkọwapụta ya.
Ọ bụghị ihe ndabara na na ọnwa ndị na-adịbeghị anya a mụrụ ọtụtụ ọrụ ịntanetị na-enye ndenye aha kwa ọnwa iji kwe ka onye ọkpụkpọ ahụ nata ọkwa nke dabere na Nlekota ime ụlọ nke cha cha n'ịntanetị, nke ahụ bụ peeji ịntanetị nke cha cha nke na-egosi ọnụọgụ ọhụrụ ewepụtara na tebụl dị iche iche roulette.
Otu ụlọ ọrụ ndị na-egwuputa ego si arụ ọrụ
Pụrụ Ime bbylọ ọ dị mfe iji, bido ya ma ị banye koodu ntinye, buru ibu cha cha peeji nke sọftụwia na-ekwu site na ịpị bọtịnụ ahụ Nnabata n'ọnụ ụlọ.
Ntị: peeji nke etinyere bụ nke onye na-eweta Italiantali, yabụ maka ndị egwuregwu Italiantali niile agaghị enwe ihe isi ike iji Pụrụ Ime bbylọ, maka ndị bi na mba ndị ọzọ, ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume ịkwanye peeji ahụ yabụ ngwanrọ ahụ agaghị arụ ọrụ.
Onye nwere mmasị na Pụrụ Ime bbylọ ga-anwale ya adịchaghị ịzụta akwụkwọ ntuziaka na Amazon, n'ihi na ọ gaghị ekwe m omume itinye aka ịgbanwe koodu ahụ n'ihi na enweghị m ike ijikọ na nyiwe egwuregwu mba ọzọ.
Ọ bụrụ na ị bụghị onye bi na andtali ma enweghị ike ịlele ibe nke na-ebu Lobby Miner, jiri a Okwey ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche, mana maka nsogbu a mechara onye ọkpụkpọ ga-eme ihe iji chọta azịza.
Ozugbo a na-ejikarị bọtịnụ ahụ abanye n'ọnụ ụlọ cha cha Nnabata n'ọnụ ụlọ, dị nnọọ pịa bọtịnụ nke abụọ Malite Ngwuputa na Lobby Miner ga-amalite idekọ nọmba tebụl niile na ibe ahụ.
Enwere okpokoro 20 ugbu a n'ọnụ ụlọ, niile sitere na ikpo okwu a maara nke ọma Playtech, ma abuo n’ime ha egosighi usoro onu ogugu ndi anaputara n’ebe anabatara, ya mere na ndebanye aha ahu n’agha n’out oge Tebụl 18.
A ga-edekọ data niile nke tebụl 18 ndị a na ọtụtụ faịlụ ederede, dị na folda ahụ ndapụta nke usoro ihe omume.
I nwekwara ike pịa bọtịnụ ahụ iji nweta folda ahụ Nchekwa data, yana ikpochapụ ọdịnaya nke faịlụ niile dị pịa bọtịnụ ahụ Tọgharia faịlụ.
Jiri data nke Lobby Miner nakọtara
Ngwa ndị ahụ enweghị njedebe, naanị na-eche na ụfọdụ sọftụwia na-atọ ụtọ dị adị oge ụfọdụ ThatsLuck ha na-eji faịlị ederede maka nyocha ọnụ ọgụgụ, dịka:
►Roulette Super Stats nke ị nwere ike nyochaa ugboro ugboro, igbu oge na ugboro ugboro nke ọnụọgụ ma ọ bụ ohere dị iche iche na nso ezigbo oge;
►Roulette Bias Sniper nke ị nwere ike ịlele maka tebụl 18 ma ọ bụrụ na enweghị isi na-eme na-enweghị ịdekọ ọnụ ọgụgụ na tebụl mepere ma nwekwaa otu otu oge;
►Roulette Trends Hunter nke ị nwere ike igbochi usoro nke ohere dị iche iche (ma ọ bụ mpaghara) iji mebie ha.
A ga-ebipụta ngwaọrụ ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya iji mee nke ọma Pụrụ Ime bbylọ, nke ahụ bụ sọftụwia ọhụrụ nke site na ijikọ na faịlụ ederede dị iche iche nke Lobby Miner dere, ga-enwe ike ịdọ aka na ntị na ozugbo onye ọkpụkpọ ahụ dịka usoro ọ chọrọ itinye.
Dị ka Lobby Miner na-edekọ
Dị ka ozi ikpeazụ m chere na ọ bara uru ịkọ na ndebanye aha na-ewere ọnọdụ n'ụzọ dị otú a: maka tebụl ọ bụla ọnụ ọgụgụ na-apụ n'anya site na usoro nke nọmba 5 nwere ike ịhụ na oghere ahụ ka agbakwunyere na faịlụ ederede.
Ya mere, ọ bụrụ na ihe atụ na tebụl ị hụrụ na nọmba 1-2-3-4-5 apụtala, ozugbo nọmba ọhụrụ pụtara usoro na vidiyo ga-aghọ 23-1-2-3-4 na ya mere a ga-agbakwunye nọmba 5 na faịlụ ederede nke okpokoro ahụ. Nke a na omume pụtara na nyocha ndị ahụ ga-ewere ọnọdụ na nkwụsị nke nọmba 4 ma ọ bụ 5 ma e jiri ya tụnyere sorties a hụrụ na ibe weebụ.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ana m agwa gị na ngwanrọ a nwere ike ịkwụsị ịrụ ọrụ taa ma n'ọnọdụ ọ bụla ọ gaghị enwe nkwalite ọ bụla n'efu, n'ihi na ọ bụrụ na ihe atụ ndị na-eweta ahụ kpebiri ịgbanwe peeji nke weebụ ka ọ ghara igosizị nọmba, ma ọ bụ karịa gbanwee java Koodu nke ibe iji gbochie ndebanye aha nke nọmba, enwere m ike agaghị enwe ike ịme ka ngwanrọ ahụ rụọ ọrụ ọzọ.
Chee echiche dị ka enwere ike ịkwụsị obere ego ị ga - emecha maka ịzụta akwụkwọ ntuziaka nke nke a ma ọ bụ mmemme ndị ọzọ enwere ike jikọta ya na Lobby Miner. Ọ bụ ya.
Nwee anụrị ma echefukwala ịdenye aha na chanel Telegram ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụchalụ akụkọ niile na akwụkwọ ndị na-abịanụ.
Nbudata Nbudata	LMiner.zip - 72 MB